Laftagareen waxba uma hanbeyn Koofur galbeed | KEYDMEDIA ENGLISH
Laftagareen waxba uma hanbeyn Koofur galbeed
Cabdicasiis Laftagareen, ayaa in ka badan 30%, xubnaha goloyaasha maamulkiisa, ku daray baarlamaanka 11-aad, taas oo loo fasirtay inuu ka xirxirtay Baydhabo.
BAYDHABO, Soomaaliya – Madaxweynaha Koofur galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed [Laftagareen], ayaa noqday Madaxweynaha, xubnihii ugu badnaa ee ka kala tirsanaa, Golyaasha maamul dowlad gobolleed, ku dara Baarlamaanka 11aad ee JFS, taas oo sare u qaadday, shakiga la xariira inuu ka tagayo, xilka ugu sarreeyay Baydhabo.
Sida ay muujinayaan xogaha hadda la hayo, in ka badan 10 Wasiir, oo ka tirsanaa Xukuumadda Laftagareen, Guddoomiyaha Baarlamaanka KGS, Taliyayaal ciidan iyo Agaasimayaal guud, ayaa ku biiray Baarlamaanka heer Federaal, kuwaas oo maalmo gudahood u soo ruuqaanan doona caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha, Wasiirka Xanaannada xoolaha, Wasiirka Qorsheynta iyo maalgashiga, Wasiir ku-xigeenka warfaafinta, Wasiirka Gaadidka iyo Duulista hawada, Diinta & Owqaafta, Waxbarashada, Boostada & isgaarsiinta, Wasiir ku/xigeenka Mareeynta iyo Wasiirka Howlaha guud iyo Guryeenta, ayaa dhamaantood soo faarujiyay KGS.
Wasiirka Amniga gudaha iyo Wasiirka Arrimha Gudaha & dib-uhishiisinta, ayaa dhankooda qeyb ka ah, xubnaha la sugayo maalin kadib, Guddoomiyaha Gobolka Baay, Agaasimaha Guud Wasaaradda Caafimaadka, Agasimaha Guud ee Qorsheynta iyo ku dhawaad 20 xildhibaan oo ka tirsanaa kuwa KGS, ayaa dhankooda helay kuraasta baarlamaanka 11-aad.
Laftagreen, ayay wararka qaar sheegayaan, inuu qaadan karo, kursi baarlamaan, si uu ugu tartamo guddoomiyaha Golaha Shacabka, waxaana arrinkaas, cadaadis ku saaraya, Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, oo dhankooda dhawaan safar u ah, magaalada Baydhabo, ee xarunta gobolka Bay, halkaas oo ay aamninsan yihiin in ay ka heli doonaan codod badan.
HOP172, oo ah, kursiga sida gaarka ah, isha loogu hayo, waxaa 2016-kii Baydhabo ka soo qaatay, Laftagareen, inkastoo, uu iska casilay, markii loo boobay Madaxweynaha Koofur galbeed, waxaana sanadkaan ku soo bixi doona, isla isaga ama Soddogiis Taliyaha Asluubta Jen. Mahad Cabdiraxmaan [Shub].
15 bishan, ayaa la soo af-meeri doonaa guud ahaa doorashooyinka KGS, oo ay hadda ka harsan yihiin, kaliya todobo kursi, wuxuuna laftagareen, ka baxsanayaa cunaqabateynta Mareykanka, oo warar hoose, sheegayaan in ay hore ugu dhacday, maadaama uu ku daaban yahay Farmaajo, oo dib u dhaca doorashada masuul ka ah.